Mifananidzo yaGeorge Floyd kubva kuPortland Apple Store ikozvino ine mugashiri | Ndinobva mac
Munguva yemhirizhonga yakaitika chirimo chapfuura mushure mekufa kwaGeorge Flyod nemapurisa, mazhinji aive maApple Stores muUnited States ayo dzaive dzakashongedzwa nemapuranga emapuranga kudzivirira kupasa kwekuratidzira kubva pakushandura zvitoro zveApple kuita zvinhu zvekupamba.
Vazhinji vaive maartist avo vakatora mukana wekuisirwa mapaneru aya ku gadzira mabasa akatsaurirwa kumunhu uyu. Kunyangwe mazhinji acho akaparadzwa, iyo iri muApple Store paPioneer Place muPortland yakachengetedzwa nekuda kweApple. Muna Zvita wapfuura, kambani yakazivisa kuti yaizochengeta chivakwa ichi pasina kupa rumwe ruzivo nezvayo.
Mwedzi wakazotevera isu tatoziva kuti ndiani achatora paneli sezvakataurwa nevakomana kubva 9to5Mac. Kwave kuri isingabatsiri sangano Usapfure PDX kutarisira kuchengetedza mweya wekuratidzira kwerunyararo uye rusaruro rwe2020.
Artist Emma Berger, penda mufananidzo waGeorge Floyd pamwe chete namazwi Handigoni Kufema. Husiku humwe, mamwe mapaneru akazadzwa nehumwe kumeso, achichinja kuita kollaji inoratidza mweya wekuratidzira.
Usapfure PDW yakazivisa kuburikidza neayo webhusaiti kuti wabvuma basa rekuchengetedza mapaneru, kunyangwe parizvino isina kusimbisa kana pani iyi ichave iratidzwe neruzhinji mune ramangwana.
Mutauriri weApple akataura maererano nechipo ichi:
Vanyori vanobva munharaunda yePortland vakafungidzira chirafu chisina chinhu chakakomberedza Pioneer Place Apple Store uye vakagadzira chidimbu chehunyanzvi chinoremekedza kuenderera kurwira kurwira uye hupenyu hwaGeorge Floyd, Breonna Taylor naAhmaud Arbery.
Apple inotsigira maartist uye vese avo vanorwira hutongi hwemagariro uye verudzi. Isu tinokudzwa kuve takagamuchira murals uye isu tinofara kuisa hunyanzvi kuti Usapfure PDW mukutsigira kwavo kutsigira shanduko yemagariro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Mifananidzo yaGeorge Floyd kubva kuPortland Apple Chitoro iye zvino yave neanogamuchira
Microsoft inozivisa iyo Surface 7 muvhidhiyo kuyedza kuita benzi reMacBook Pro